Gbasara Anyị - Quanzhou Stamgon Trading Co., Ltd.
Quanzhou Stamgon Trading Co Ltd. anọwo na-azụ ahịa na textiles kemgbe1993. Ngwaahịa anyị gụnyere uwe mwụda osimiri, akwa mmiri na uwe Yoga wdg. Ahịa ahịa anyị dị na mba ndị dị na Europe, North American, South pacific na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Anyị nwere ụlọ ọrụ asaa na-emekọrịta ihe nke nwere ihe karịrị ndị ọrụ ruru narị atọ. Mmepụta mmepụta anyị ruru nde US nde iri abụọ kwa afọ.
Anyị na ndị ahịa dịka Zara, K-Market, wdg. Anyị ji obi anyị niile na-anabata ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile ka ha gaa n'ụlọ ọrụ anyị ma soro anyị kwurita banyere azụmahịa. "Banyere ndị ahịa ọ bụla dị ka ihe kachasị mkpa, inye ndị ahịa ọrụ kacha mma" bụ ihe anyị. Anyị ga-enweta nkwado oge niile ma nwee olile anya ịbụ ndị mmekọ kacha mma.
Banyere ụlọ ọrụ nkwonkwo anyị
Factorylọ ọrụ nkwonkwo anyị nwere ọrụ pụrụ iche n'ichepụta uwe mmiri na uwe egwuregwu, nke nwere ike ijikwa ọnụ ahịa mmepụta, na-ejikwa njikwa ngwaahịa ruo n'ókè kachasị ukwuu, ma na-eme ka nzaghachi n'ahịa dị ngwa. Ka ọ dị ugbu a, e nwere ndị ọrụ karịrị narị atọ na iri abụọ, ụlọ ebe a na-arụ ọrụ karịrị 4000 square.
Na nmalite nhiwe nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ tufuola otu njikwa ọrụ ọrụ aka dị elu ma sie ike, guzobere usoro ọrụ mmepụta ihe zuru oke, ma tinye ego nke ukwuu n'ichepụta usoro mmepụta dị elu, igwe na-akpaghị aka, igwe na-agbasa na ngwa ndị ọzọ. N'ụbọchị ndị a, a na-enweta igwe dị iche iche nke ịkwa akwa akwa akwa na ngwa ndị na-ebugharị ebubata ngwa ngwa. Enwere eriri mgbakọ isii, mkpịsị ugodi anọ na anọ na waya pụrụ iche, arụpụta kwa ọnwa nke ihe karịrị 200,000 iberibe.
Factorylọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ ọkụ 180, na ọkachamara QC nwere ahụmịhe nyocha na oge nke etiti na tupu mbupu, jide n'aka na ị na-enwe ndị ahịa ahịa mma.
Iji kwado obere iwu sitere na Amazon ma ọ bụ obere ndị na-ere ahịa ndị ọzọ, anyị kwadebere ngwaahịa zuru ezu nke ụlọ ọrụ nkwakọba ihe nke enwere ike ibunye n'ime ọtụtụ ụbọchị, anyị ji obi ụtọ na-anabata gị ịbịa na ụlọ ọrụ anyị maka mkparịta ụka azụmahịa ọzọ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Eserese nke Carton (30 / 04-3 / 05)
Ihe ngosi Melbourne (07 / 11-09 / 11)
Ime Anwansi Gosi (4 / 2-7 / 2)
Ihe ngosi ISPO (2 / 86-01 / 07)
Ahịa bịara na nke anyị